1. Umnyhadala wolonwabo ukufuphi nasekupheleni konyaka. Abantu abaninzi balungiselela izipho zikaEva woNyaka oMtsha. Nokuba ungayenza ngokwakho Okanye uthenge izipho oza kuzinika abantu obathandayo Kwaye uninzi loomama kusenokwenzeka ukuba balungiselela abantwana babo izipho zokuzibandakanya kulonwabo kunye nabahlobo esikolweni.Namhlanje sinendlela yokusonga ibhokisi yesikwere. Njengesipho okanye uhombise ikona yeKrisimesi enobunzima Ikwanika imvakalelo eyonelisayo kubo bobabini umniki kunye nomamkeli.
2. Izixhobo Isongelwa njani isikwere ibhokisi
3. - Isisongelo sesipho Khetha ngendlela esiyithandayo okanye ehambelana nesimbo salo mntu unikayo. Kubantu abadala, khetha imibala elula, yabantwana, ziipateni zekhathuni. Okanye iipateni ezimibalabala ezintle - izaphetha okanye iirebhoni, khetha ngendlela ehambelana nombala wephepha. Ngaba inokuba ithoni efanayo okanye ukusikwa kombala, abanye abantu basebenzisa iintyatyambo ezomisiweyo, iintyatyambo ezintsha, okanye kulula ukuzenzela ngokwakho, yinto elula ngenye indlela. Ingasetyenziswa Kodwa ukuba yeyabakhenkethi abadala okanye umphathi, kunganyanzeleka ukuba ukhethe ibhokisi elula ngombala, ngokwexesha kunye nokufaneleka kwayo.
4. Iindlela ezilula zokusonga isikwere okanye ibhokisi yesipho
5. - Beka ibhokisi yesipho kwiphepha elisongelweyo elisikiweyo. Beka ikona yeebhokisi kumacala omabini, zahlulwe ngokwamacala ½ ebhokisi esetyenzisiweyo nangaphezulu ¼ kwebhokisi njengoko kubonisiwe kumfanekiso wokuqala, ekufuneka usike imiphetho yesayizi efanayo. Ukucoceka nobuhle Ngokobungakanani bebhokisi esiyikhethileyo - Thatha iphepha ukugquma isiqingatha sebhokisi. Emva koko ncamathelisa iglu okanye itheyiphu enamacala amabini - Yiza nelinye icala lephepha elisongiweyo kunye neglu. Okanye itheyiphu enamacala amabini-itheyiphu kwakhona ukuze yomelele kwaye iqiniseke Ewe ungawi -Phezulu kwebhokisi. Cinezela iziko ukuze ulingane imiphetho. Songa imiphetho kakuhle-kwaye emva koko ufake isicelo kumfanekiso Qhoboshela iteyiphu engafihlisiyo - bopha iirebhoni ngaphaya komfanekiso. Okanye abanye benu abanokuyinxiba ngokuxhomekeke kukhetho lwakho kunye nobuchule.- Bopha isaphetha seentyatyambo ezomileyo okanye iintyatyambo ezintsha ngokokukhetha komntu.
6. Imihombiso yebhokisi entle yongeza umbala kunye nolonwabo kusapho.
7. Ngexesha lekrisimesi Iibhokisi zinokusongelwa ngobukhulu obahlukeneyo kunye nemibala kwaye zibekwe phantsi komthi. Okanye faka izipho ezininzi ngaphakathi kwebhokisi ukuze abantwana bonwabe xa bevula isipho abasifumeneyo. Khawufane ucinge xa uneSanta Claus. Yiza nezipho Ulonwabo oluninzi Kwaye ukwenza oonopopi bendlu kunye nosapho ngenye indlela Oko kunokwenziwa nguwe ngendlela elula kakhulu, kunye nebhokisi esongelwe entliziyweni Yenziwe ngothando Umamkeli uya kufumana ukhathalelo kunye nenkoliseko. Kwaye nendalo engenamda nayo Emva koko, masilungiselele ukwenza ibhokisi yesipho njengathi !!